मार्च | 2010 | manka kura
तिमी त गै गयैा
तिमी मेरेा सहाराकेा
वलियेा लठृी थियैा
तिमी सुख दुखकेा
मेरेा सिरानी थियैा
संगै मर्ने संगै जीउने
जूनी जूनी सम्म
हामी दुर्इकेा वाचा
मैले मात्र मान्नु परर्येा
मैले वाच्नु परर्येा ।
जीवनकेा सिन्दूर उड्येा
ढुकढुकी मुटु मात्रै हैन
हांसेा र खुसी पनि लग्यैा
तिमी विनाकेा म रित्तीए
मेरेा लाल म वाट लग्यैा
मैले वाच्न परर्येा ।
तिमी भएकेा भए
तिमीले वेाक्ने थियैा
अाधा म वेाक्ने थिए
धर्तीमा सिंगै अाकाश वेाकेर
हामी हाम्रेा गन्तव्यतिर वढीरहेका थियैा
म वेाक्न पर्दा
तिमी विनाकेा येा डुङगा
नदीमा पारलाग्ला नलाग्ला
पार लाउंला नलाउंला ।
तिम्रेा र मेरेा मायाकेा
सिर्जित मुटुका टुक्राहरू
म जस्तै तिमी जस्तै
हाम्रा जीवनका सहारा थिए
के सेाच्दै हेालान् यीनिहरूले
के वुझदै हेालान्
जीवन र मृत्युकेा कथा
जीवन प्रेम र मृत्यु
खै कसरी गरू परिभाषा
जीवन अथाहा रहेछ
मैले कसरी अर्थ्याउं ।
विजुलीकेा उज्यालेालार्इ अाफुले पच्छ्याउन नसकेकेाले टांसेा पनि राख्न नसकि रहेकेा वेलामा पुरानेा डायरी पल्टाउंदै जांदा २०४५ साल माघ महिनामा लेखेकेा ‘त्रिशुली’ शिर्षककेा कविता भेटे । येा कविता पढेपछि त्यस वेला घटेकेा त्रिशुलीकेा घटना पनि सम्झे । तपार्इहरूकेा अनुमती माग्दै अाज त्यसैलार्इ राख्ने केासिस गरेकेा छु ।
२०४५ साल माघ तिरकेा कुरा हेा । वलराम र म घुम्न पनि जाने र चित्रकला पनि केार्ने भनेर त्रिशुली हानियैा । वलराम त चित्रकला र मुर्तीकला दुवै गर्थे । म भने सिक्दै थिए । चित्रकला मेरेा अैाधि सेाखकेा विषय थियेा । तर मैले यसलार्इ निरन्तरता दिन सकिन । हामीले त्यतिवेला त्रिशुलीनै किन रेाज्यैा भने , म भूमि सुधार विभागमा काम गर्थे । त्रिशुलीमा मेरा साथी गणेश रंजितकार भूमि सुधार कार्यालयमा काम गर्थे । उनैकेामा सुत्न वस्न पार्इने र नजिकै भएकेाले पनि हामीले त्यता जाने निर्णय लियैा । हामीले दुर्इ रात त्रिशुलीमा वितायैा । वेलुका वास वस्न अाइपुग्ने गरी विहानै केाठावाट निस्कन्थ्यैा । घुम्दै ,चित्र वनाउंदै रमाइलेासंग नै वितायैा । नुवाकेाट दरवार पनि साथीकेा सहयेागमा दरवारकेा माथिसम्मै पुगेर हेर्न पायैा ।
त्रिशुलीकेा पावर हाउसवाट अलि पर नहर पश्चीम तर्फ सानेा पुल तरेर जानु पर्ने एउटा ठूलेा ढिस्केाकेा मुनी वजार जस्तेा गाउं थियेा । डांडामा लटरम्म केरा घारी पनि थियेा । हामी दुवै जना नहरकेा सानेा पुलमा वसेर पारी पटृीकेा त्येा गाउंकेा चित्र उतार्दै थियैा । हामी भएकेा ठाउंमा केही मानिस जम्मा भै हाले । मैले वनाएकेा चित्रमा एक जनाकेा घर छुटेछ । किन येा फेाटेामा मेरेा घर छुटाएकेा , मेरेा घर त राख्नै पर्छ भनेर निकै जेाड गरेका थिए । तै साथीले वनाएकेा चित्रमा उनकेा घर परेकेा रहेछ र उनलार्इ सम्झाउन सजिलै भएकेा थियेा ।
दुर्इ दिन पछि फर्कन साझा वसकेा टीकट नपाएर वल्ल वल्ल गणेशजीलार्इ भन्न लगाएर टीकट लियैा । वस एक वजे काठमाडैाकेा लागि छुट्रने थियेा । हामी खाना खार्इ सकेपछि समय भएकेाले त्रिशुलीकेा फलामे पूलकेा चित्र उतार्न पुल भन्दा तल त्रिशुलीकेा वगरमा पुग्यैा । पुलमा हेरेर चित्र वनाउंदै गर्दा पेा साझा वस त पुलवाट काठमाडैा तिर हानिन्छ । हामी दुवै जनाले एक वजे काठमाडैा जानु पर्छ , वसकेा टीकट छ भन्ने कुरा चित्र वनाउने धुन मा विर्सिएछैा ।पुलमा अाफु चढ्ने वस गुडेकेा देख्दा पेा दुवै जना झसङग भयैा । ए …वस भन्दै , व्रस, रङग, झेालामा हतार हतारले केाच्दै वस भेटृार्इ हालिन्छ कि भनेर सकेसम्म दैाड्यैा । ढुङगेसम्म दैाडेर अार्इपुग्दा पनि वस नभेटृाए पछि हामी निरास नै भयैा । हघिल्लेा दिन साथीलार्इ जसरी पनि काठमाडैा जानै पर्छ भनेर निकै भनसुन गर्न लगाएर टीकट लिएका थियैा । अव तीनका अगाडी के भन्ने हेाला भनेर लाज लागिरहेकेा थियेा । पैसा पनि गुमायैा र वेकुफ पनि वनेकेा मा हामी वडेा लज्जित थियैा । त्यस पछि हामी हिंड्दै गंगटे सम्म वस पार्इहालिन्छ कि भनेर हिंडदै अायैा । त्यस दिन पंचायतकेा दिवस सिवस के थियेा कुन्नी सरकारी कर्मचारी र पंचहरू भेला भएर जुलुस पनि गर्दै थिए । अव हामीले हिंडेर जाने सुर गरेर वाटेामा फेला परेका मानिसहरूलार्इ काठमाडैा जाने छेाटेा वाटेाकेा वारेमा सेाध्न थाल्यैा । गंगटेवाट तादी नदी तरेर थानसीं हुंदै रानीपैावा निस्कने र रानीपैावामा तरकारी लिन राती अवेर सम्म गाडी अाउने भएकेाले गाडी सजिलै पाइने र अाजै घर पुग्न सक्ने कुरा वताए । हामी दुवै जना येा वाटेाकेा वारेमा अपरिचित नै थियैा । गंगटेवाट झरेर तादी तर्दै थानसिंकेा फांट पार गरेर उकालेा लाग्दै वाटेामा भेटेकालार्इ सेाधी खेाजी गर्दै हामी वेलुका नैा दश वजेतिर रानीपैावा पुग्यैा । थानसींवाट पुरै उकालेा लाग्नु पर्देा रहेछ । झन्न त्यतिवेला नेपालवावाकेा पैदल भ्रमणा त्यही वाटेा भएर अाउने कार्यक्रम रहेछ र वाटेा हिंड्न हुने गरी मिलार्इएकेा रहेछ ।जस्केा कारण हामीलार्इ पनि निकै सजिलेा भयेा । रानीपैावा केा तातेा तातेा भात खाएर मुला अेसार्ने जीप गाडीमा काठमाडैा सेाहीरात अार्इपुगेका थियैा । त्रिशुलीकेा घुमार्इ यसै पनि रामार्इलेा भएकेा थियेा झन् वस छुटे पछि हिंडेर यात्रा गर्न पर्दा हाम्रेा यात्रा निकै रमार्इलेा र अविस्मरणीय नै भएकेा थियेा ।
येा हुस्सु भएकेा कुरा लेख्दा लेख्दै देास्रेा पटक पनि ठुलै हुस्सु भएकेा र दुख पाएकेा कुरा पनि याद अायेा । माधवकेा भान्जीकेा विवाहकेा सर्लाही मंलगवावाट निमन्त्रणा अाएकेाले केही साथीहरू गयैा । फर्कने वेलामा वसकेा टीकट लि सकेपछि वस छुट्न झन्डै घंटैा वांकी थियेा । अापकेा सिजन भएकेाले जताततै अाप वेच्न राखिएकेा थियेा ।अाप देखेर हामी सवैकेा मुखमा पानी अायेा । वसले वेाकी हाल्छ एक वेारा जति लिएर जाने विचार अायेा । एकजना अाप वेच्नेलार्इ अलि राम्रेा अाप छैन हामी अली वढीनै लान्छैा भन्यैा । उसले मेरेा घर यी नजिकै हेा म संग एकदम वढीया अाप घरमा छ जाउ भन्येा । केही साथी वसमै वसे र हामी केही साथी राम्रेा अाप किन्न उसका पछि पछि लागेर दाम्लाले वांधिएकेा भेडा झै डेारीयैा । ती पर ती पर भन्दा भन्दै हामी निकै पर पुग्यैा । वल्ल वल्ल उसकेा घरमा पुगेर हेर्दा अाप त उही वजारमा भएकेा जस्तेा मात्र छ । अाप किन्न लाग्ने हेा भने वस छुट्छ भन्दै हामी त्यहांवाट अाप नलिकन दैाडी दैाडी वसपार्कमा अाउदा वस अघिनै गै सकेकेा कुरा थाहा लाग्येा । काम कुरेा एकातिर कुम्लेा वेाकी ठीमीतिर भनेकेा यही हेाइन त । यसरी जीवनमा वडेा मजाले हुस्सु भएका थियैा । देास्रेा वसमा निकै सास्ती पाएर हुस्सु दन्ड तिर्दै अाएका थियेा । अहिले पनि हामी ती साथी भेट्दा अाप किन्ने हैन भनेर वेलावेलामा हंस्सी गर्छैा ।
तपाइहरू पनि यस्तेा हुस्सु हुनु भएकेा छ । छ भने लेखैान ।
अनि त्रिशुलीकेा वारेमा जानी नजानी त्यतिवेला लेखेकेा कविता जस्ताकेा तस्तै टांसेा गरेकेा छु ।
नुवाकेाटकेा सदरमुकाम रैछ विदुर
घामै छेक्न तम्सीएकेा ढुङगे तेर्सिएर
दांया वांया ठूला नदी तादी त्रिशुली
स्वच्छ सफा कल् कल् गर्दै वग्छ त्रिशुली ।
हराभरा अन्न फल्ने थानसिं रहेछ
गंगटे चांहि चाउरिएर उतैतिर हेर्छ
झलमल पार्छु भन्छ गाउं शहर जम्मै
नेपालकेा सेतेा सुन वग्दै त्रिशुली ।
वटृार हेर्रयेा दुख पीर थुपरिए जस्तै
हरियेा परियेा सागपात छैन, अल्छी वसे जस्तै
युवा युवती विदेसिन्छन् ,खेाजी गर्दै काम
कलकारखाना उध्येाग पनि, छैन त्रिशुलीमा
एकिकरण गर्ने राजा, वस्छन् अैाला ठड्यार्इ
विदूर जांदा पिपलटारले स्वागत पहिले गर्छ
देवीघाट् नी के कम छ र, झलमल पार्छ
हास्नु पर्ने त्रिशुलीले, किन रेाइ वस्छ ।
त्रिशुलीकेा ठाडेा वजार, हेर्न रामार्इलेा
जति जति माथि चढ्येा ,उति घमार्इलेा
माथिवाट पानी खसी , वल्ने विजुली
स्वच्छ सफा कलकल गर्दै वग्ने त्रिशुली ।
सम्पूर्ण व्लग प्रेमी साथीहरूलार्इ चैते दशैंकेा शुभकामना ।
अमेरिका पुगेकेा देास्रेा दिन विहान सवेरै निद्रा खुल्येा । भार्इ काममा गै सकेका रहेछन् । उनी दुर्इ ठाउंमा गरेर दिनकेा सेाह्र घंटा काम गर्दा रह्रेछन् । विहान झिसमिसेमै हिंडेकेा मानिस वेलुका दश वजे पछि मात्र केाठामा अाइपुग्छन् । विदाकेा दिन वाहेक अरू दिन त केटाकेटीहरूले वावुकेा वेाली पनि सुन्न पाउंदैनन् । वहिनीकेा वेलुकाकेा ड्यूटी रहेछ । एघार वजे देखि विहान सात वजे सम्म रातभरी काम गरेर घरकेा विहान वेलुकाकेा चुल्हेा चम्केा र केटाकेटीहरूकेा स्कूल सम्म भ्याउनु पर्देा रहेछ । अमेरिकाकेा जीवन दुखमय नै छ । यता पनि भात पकाउने, भांडा माज्ने र लुगा धुने, सरसफार्इ गर्ने काम अपवादका रूपमा छेाडेर नेपालीका हकमा महिलालेनै गर्नु पर्छ भन्ने अाम सेाचार्इ सवै पुरूष वर्गमा भएकेा पांए ।
छेाराछेारीहरू नजिककैकेा सरकारी स्कूल Menlo Park Elementry School मा पढ्दा रहेछन् । स्कूल र एपार्टमेन्ट सडककेा वारीपारी थियेा । विहान म पनि वहिनीकेा साथमा केटाकेटीहरूलार्इ लिएर स्कुल पुगे । स्कुलकेा कम्पाउणड ठूलेा थियेा । एक तले, छ । सात वटा भवनहरू थिए । विध्यालयकेा समयमा नजिकै रहेकेा मुल सडकमा अतिनै कम गतिमा गाडी हांक्नु पर्ने रहेछ । विध्यार्थीहरूलाइ वाटेा कटाउन ट्राफिक संकेत लिएर सडककेा फुटपाथमा विध्यालयकेा तर्फवाट वसेका मानिसले वाटेा कटाउंदा रहेछन् । त्यस्ता मानिसहरू प्राय रिटायर्ड भएका वुढापाका र दुवै हात नभएकाहरू पनि कृतिम हातद्वारा पनि काम गरि रहेकेा देखे । सरकारी विध्यालयहरू ठाउंठाउंमा रहेपनि जेा जहांसुकै गएर सामान्यत पढ्न पाइदेा रहेनछ । कुन कुन विध्यालयमा कुन कुन एरियाका विध्यार्थीहरूले पढ्न पाउने हेा तेाकिएकेा हुंदेा रहेछ । र सेाही अनुसार केा वस रूट राखिएकेा हुंदेा रहेछ । वस सेवा पनि निशुल्कनै हुंदेा रहेछ ।
राज्यले सरकारी विध्यालयमा High School(10+2 ) सम्म निशुल्क पढाउने व्यवस्था रहेछ । देशभरकै Elementery School हरूमा लन्च, व्रेकफास्ट खुवाउने व्यवस्था छ । खाजा वा लन्चकेा वार्षिक क्यालेन्डरनै वनेकेा हुंदेा रहेछ । कुन कुन दिन के के खाजा खुवाउने सवै कुरा लेखिएकेा हुंदेा रहेछ । स्कुल जांदा विध्यार्थीहरूले नेपालमा जस्तेा दश पन्ध्र किलेाकेा किताव कापीकेा भारी वेाकेर जानु पर्देा रहेनछ । रित्ता हात वा एक दुर्इ पाना हेाम वर्क वेाकेर गए हुंदेा रहेछ ।कतिपय हेामवर्क पनि दुर्इ तीन दिन भित्र गरेर वुझाय हुंदेा रहेछ । पढार्इ सम्वन्धी धेरै सहायक पुस्तिकाहरू फेाटेा कपी पनि फ्रि पाउंदा रहेछन् ।यहां घेाकन्ते विध्या भन्दा स्कुलमै वढी Activeteys गराउन लगार्इदेा रहेछ । केटाकेटीहरू विध्यालय भर्ना गराउंदा वावु अामाकेा वर्षै पिच्छेकेा अाय व्यय विवरणा भरेर वुझाउनु पर्देा रहेछ । अायश्रेात वढी हुने परिवारले खाजा वापतकेा सामान्य रकम मासिक रूपमा वुझाउन पर्देारहेछ । कापी ,कलम,पुस्तक अादि विध्यालयवाटै प्राप्त हुंदेा रहेछ । वर्षकेा एक पटक राम्रा झेाला पनि पाउंदारहेछन् । हरेक वावु अामाले अाफना केटाकेटीहरूलार्इ अनिवार्य रूपमा स्कूल भर्ना गर्नु पर्ने छ । यहां शिक्षा अनिवार्य र त्येा निशुल्क हुने व्यवस्था रहेछ । अठार वर्ष सम्म केटाकेटीकेा लालन पालन, हेरचाह अामा वावुले अनिवार्य गर्नै पर्ने ,अठार वर्ष पछि भने वावु अामालार्इ वाध्यता हुंदेा रहेन छ ।
Arizona State केा School System अनुसार केजी देखि कक्षा १२ सम्म स्कूलहरूमानै अध्यापन गराइन्छ । हरेक वच्चा पांच वर्ष कटेपछि मात्र स्कूलमा भर्ना हुन पाउंदा रहेछन् । Public, Charter, Private र चैाथेा विकल्प Home Schooling मा पढ्न पाउने व्यवस्था रहेछ । पव्लीक स्कूल केा Elementary तहमा केजी देखि पांच वा छ कक्षा सम्म पढार्इ हुन्छ । Middle तहमा छ कक्षा देखि अाठ कक्षा सम्म वा सात कक्षा देखि अाठ कक्षा सम्म र हार्इस्कूल मा भने नैा कक्षा देखि वाह्र कक्षा सम्म अध्यापन गराइन्छ । अर्केा पव्लिक स्कुलमा जस्तै चार्टर स्कूल पनि हुंदेा रहेछ । सरकारी स्कूलमा पढाउन नचाहनेहरूले यस्ता स्कूलहरूमा पढाउंदा रहेछन् । यस्केा कुनै क्षेत्र तेाकिएकेा हुदेा रहेनछ । जुनसुकै एरियामा वसेावास गर्नेहरू पनि यहां पढ्न सक्दा रहेछन् । येा चार्टर स्कूल पनि नि शुल्क नै हुंदेा रहेछ । चार्टर स्कूलहरूले एक देखि वाह्र कक्षा सम्म एउटै स्थानमा संचालन गर्न सक्दा रहेछन्र । यहां प्रवेश पाउन भने चार्टर स्कूलकेा अग्रिम परीक्षामा उर्तिण हुनु पर्देा रहेछ । चार्टर स्कूललार्इ पनि केन्द्रिय, राज्य र कम्युनिटी तहवाट पनि केही सहयेाग प्राप्त हुंदेा रहेछ । विध्यालय संचालन गर्न नपुग अार्थिक रकम भने यिनीहरूले विभिन्न माध्यमवाट संकलन गर्न पाउंदा रहेछन्र ।
प्राइभेट रूपमा संचालन भएका विध्यालयले श शुल्क पढाउने गर्दा रहेछने । यस्ता प्राइभेट स्कूलहरू भने धर्म विशेषका अाधारमा पनि खुलेकेा हुंदेा रहेछ । यस अलवा Home Schooling भनेर विध्यालयमा नपढी अाफनै घरमा पढी राज्यले तेाकेका परीक्षाहरूमा संलग्न भर्इ प्रवेशिका ( वाह्र कक्षा ) स्तरकेा शिक्षा सम्म हासिल गर्न सक्दा रहेछन्र् । प्राय कक्षा उत्तिर्ण गरि सकेपछि सवै तहका Graduation कार्यक्रम पनि हुंदेा रहेछ ।
वाह्र कक्षा पास गरि सकेपछि भने University मा वा Pims county( एरिजेानाकेा चांहि पीमा ) मा पढ्न पार्इदेा रहेछ । यहांकेा उच्च शिक्षा भने महंगेा नै छ । वाहिरवाट अाएर पढ्ने अार्थिकस्तर कम भएका विध्यार्थीहरूले पढार्इलार्इ अघि वढाउन काम पनि गर्नु पर्ने स्थितिमा पीमा कम्युनिटी कलेजमा कतिपय विषयहरू काम संग मिलार्इ पढ्न पाउंदा रहेछन् ।
(मैले माथि लेखेका कुराहरू वाहिरी रूपमा अाफना प्रयासले थाहापाएका सामान्य जानकारी मात्रै हुन्र । यस क्षेत्रकेा विज्ञ पनि म नभएकेाले विज्ञ पाठकहरूले यसलार्इ पूर्णता दिनुहुने छ भन्ने लागेकेा छ । )
पालुवा फेरे रूखले
पातविनाकेा फूल फूलेछ
अारूवेाटमा हिउं परेछ ।
विहानीकेा स्वागतमा मुस्कुराउंदै
लाली गुरांस फूलेकेा देख्दा ,
उड्दछ मन कावा खांदै
अालुवखडाका फूलफल्दा ।
काफलपाक्येा भन्छ चरी
डाली डालीमा घुमी फिरी।
केा हेा? केा हेा? भन्दै केाइली
वनपाखाकेा गर्दै रखवाली ।
वारीमा पहेंलै सुन फलेछ
खेतकान्ला हरियै भएछ
वादलफाटी घाम लागेछ
उमङग सवकेा मनमा छायछ ।
प्रकृतिकेा पाहुना कर्याङकुरूङ
धर्ती चुम्दै उडे अाकाशमा
चराचुरूङगी नाचे डालीडालीमा
प्रकृतिकेा रानी ऋृतु वसन्तमा ।
ऋतुवसन्त जीवन भेाग्दै
अल्पायु क्याकटसकेा फूल वन्दै
विदाहुन्छ अाउने वाचा गर्दै
जीवन अत्यन्त सुन्दर पार्दै ।
२०६६ चैत्र ।
मार्च 6, 2010
येा लेख्नै पर्ने विषय त हेार्इन, केवल वसिवियालेा मात्र हेा । त्यता वस्दा र दैनिकी रूपमा अमेरिकी मुद्रा चलाउंदा अमेरिकी मुद्राका केही केही कुराले अाफनेा मन छेाएकेाले मैले वसिवियालेा संग्रहमा यस्लार्इ पनि टिपेाट गरेकेा थिए । अाज त्यही कुरा सामान्य जानकारीकेा रूपमा यसवारेमा थाहा नभएका मित्रहरूलार्इ जानकारी मिलेास भन्ने मात्र उदेश्य लिएर येा टांसेा राख्ने जमर्केा गरेकेा हुं । विज्ञ पाठकका लागि भने मेरेा विनम्र अनुरेाध छ कि पढेर यस्मा भएका त्रुटी कमिकमजेारी र थप कुराहरूकेा जानकारी दिनु हुनेछ भन्ने ठूलेा अाशा लिएकेा छु ।
संसारका सवै स्वतन्त्र रास्ट्हरूले अा – अाफनेा अावश्यकता र परम्परा अनुसार नेाट र सिक्काकेा प्रचलनमा ल्याएका छन्र । ती नेाट र सिक्काहरूमा राखिने वा छापिने विषयवस्तुहरू पनि सेाही रास्ट्रकेा इतिहाससंग जेाडीएका महत्वपूर्ण पात्रहरू , रास्ट्रका गैारव गर्न येाग्य प्राकृतिक सम्पदाहरू अादि अादि नै उल्लेख भएका हुन्छन् । भनिन्छ कुनै पनि स्वतन्त्र रास्ट्र हुन चाहिने विविध कुराहरू मध्ये त्यस रास्ट्रकेा अाफनै मुद्रा पनि हुनु पर्छ । तथापी अहिले त तेह्र युरेापेली देशहरूले सामुहिक मुद्रा युरेा केा प्रचलनमा ल्यार्इसके ।
The United State of America केा dollars हरियेा रंगकेा छ । येा 1,2,5,10,20,50 र 100 केा नेाटमा रहेकेा छ । त्यस्तै सिककाहरूमा One dollar, Half dollar , Quarter dollar, One dime , Five cent वा Nickels , One cent केा छ । यहांकेा एक रूपैया, पचास पैसा ,पच्चिस पैसा, दश पैसा, पांच पैसा र एक पैसा भने जस्तै ।
दुर्इ डलरकेा नेाट पनि छ, तर त्यति चलनमा अाएकेा पाइदैन । अाक्कल झुक्कल मात्र देखिन्छ । वान डलर, हाफ डलर केा सिक्काकेा पनि कमै चलन चल्तीमा अाउंछ । सय डलरकेा नेाट वेाकेर स्टेारमा अाउनेहरू प्राय पहिलेनै येा साट्ने पैसा छ अथवा म संग सय डलर मात्र छ भनेर पहिलेनै जनाउ दिर्इ सामान किन्ने गर्दछन् । प्राय सवै स्टेारहरूकेा रजिस्टरमा धेरै रकम राखिदैंन । सेफ ड्रप (safe drop )गरि हाल्छन् । सेभन इलाभेन कम्पनीमा काम गर्दा त वीसकेा नेाट अाउने वित्तिक्कै सेफ ड्रप गरिहाल्नु पर्थ्येा । रजिस्टरमा धेरै रकम राखेकेा छ कि भनेर समय समयमा कम्पनीका मानिसहरू अाएर रजिस्टर खेालेर चेक गर्थे । अमेरिकामा गन फ्री अथवा सवैले राख्न पाउने भएकेाले पत्याउनै नसक्ने मानिसले पनि गन , चक्कु, छुरी देखाएर (robbery ) लुट्ने हुंदा वाहिरी रजिस्टरमा धेरै पैसा नराखि सर्तक भएर वस्नु पर्दथ्रयेा ।
यहांकेा सिक्काहरू निकै टिकाउ खालकेा लाग्दछ । राम्रेा खालकेा धातुवाट निर्मित भएर हेाला । स्टेारमा काम गर्दा एक सय वर्ष भन्दा पनि पुराना सिक्काहरू पनि फाट्फुट् प्रयेागमा अार्इरहेकेा पाइन्छ । चालिस पचास वा साठी सत्तरी वर्ष अघिका सिक्काहरू त निकै चलनमा अाएकेा पार्इन्छ । सन् १९६० भन्दा अघिका सिक्काहरू चांहि चांदीकेा जस्तेा देखिन्छ । यहां सिक्काहरूलार्इ (चालिस।पचास वटाकेा) प्लास्टीक रेाल र पेपर रेालमा राखिएकेा पाइन्छ ।
यहांका प्राय धेरै मानिसहरूले Wallet अर्थात Bag केा प्रयेाग गर्दछन् । डलर र विभिन्न कार्डहरू व्यागमै राख्ने हुंदा नेाटहरू नखुम्चिएका सरलक्क परेका पार्इन्छन् । अधिकांस मानिसहरू डेविट, क्रेडिट कर्डनै घेाट्छन् । प्राय धेरैले पैसा वेाक्दैनन् , कार्डहरूनै वेाक्छन् । कतिले व्यागकेा हिफाजतकेा लागि हेाला मेाटा मेाटा स्टीलका सिक्री लगाएर राखेका हुन्छन् ।
यहां One cent (त्यहांकेा एक पैसा) केा पनि निकै चलन चल्तीमा अाएकेा पार्इन्छ । वान सेन्ट पनि लिने दिने काम वा हिसाव किताव राम्रैसंग गरिन्छ । जुनसुकै सामानकेा मूल्य राख्दा भने यहां सून्यमा नराखि पछाडी नैा अंक रहने गरि मूल्य कायम गरेकेा पार्इन्छ । जस्तै , ९९ सेन्ट, एक डलर उनानचास सेन्ट, दश डलर उनान्रअसी सेन्ट, उन्नानसय डलर उनान्रसय सेन्ट अादि । कुनै सामानकेा मूल्य एक डलर नभन्ने वा सय डलर नभनी उन्नानसय सेन्ट वा उनान्रसय डलर उनान्सय सेन्ट मात्र भन्ने अाम चलन छ ,खै किन यस्तेा रहेकेा हेाला ।
दश डलरकेा नेाटमा वाहेक यहांकेा सवै नेाटहरूमा विभिन्न कालखणडमा देशकेा वागडेार सम्हाल्ने रास्ट्रपतिहरूकेा फेाटेा अगाडी पटृी रहेकेा पार्इन्छ । एक डलरकेा अगाडी पटृी अमेरीकाकेा प्रथम रास्गपति Ge0rge Washington केा फेाटेा छापिएकेा छ । फेाटेाकेा तल Washington लेखिएकेा छ । पांच डलरकेा नेाटमा अमेरिकाकेा सेाह्रैां रास्ट्रपति Abraham Lincoln केा फेाटेा रहेकेा र Lincoln लेखिएकेा छ । त्यस्तै दश डलरकेा अगाडीपटृी अमेरीकाकेा प्रथम Secretary of the Treasury Alexander Hamilton केा फेाटेा छ भने पछाडी पटृी US Treasury केा भवन अंकित छ । त्यस्तै वीस डलरकेा नेाटमा सातैां रास्ट्रपति Andrew Jackson केा फेाटेा राखिएकेा छ भने नेाटमा Jackson उल्लेख छ । सेा नेाटकेा पछाडी पटृी भने The White House केा भवन छ । त्यस्तै पचास डलरकेा नेाटमा अमेरिकाकेा अठारैा रास्ट्रपति Olyses S. Grant केा फेाटेा छ र पछाडी पटृी US Capital केा दृश्य रहेकेा छ । अमेरीकाकेा सवै भन्दा ठूलेा नेाट सय डलरमा भने अमेरीकाकेा चैाधैां रास्ट्रपति Franklin Pierce केा फेाटेा रहेकेा छ र पछाडीपटृी Independence Hall केा फेाटेा छ ।
स्टेारमा वेला वेलामा नक्कली नेाटहरू पनि अार्इरहन्छ । सक्कली नक्कली नेाट छुट्याउन छामेर , मार्करपेन प्रयेाग गरेर र सेफ ड्रप मेसीनमा गरेर पनि सकिन्छ । सेभड्रप गर्ने मेसीनले नक्कली नेाट भए लिंदैन ,वाहिर फ्यालिदिन्छ । मार्करपेन लार्इ Counterfelt Detectory Pen भनिदेा रहेछ । येा पेनले नेाटमा धर्का तान्दा पहेंलेा सुनैाला जस्तै लेख्येा भने सक्कली र Brow अथवा Gray कलर देखियेा भने नक्कली हेा भन्ने थाहा लाग्देा रहेछ । येा मार्करले सन् १९५९ भन्दा पछाडीका अमेरिकी डलरमा मात्र काम गर्छ । म संग साथमा रहेकेा नेपाली नेाटमा पनि यस मार्कर प्रयेाग गरेर हेर्दा सक्कली डलरमा देखिने कलर नै दिएकेा थियेा । अस्तु ।
सवै व्लगमित्रहरूकेा दिन शुभ रहेास ।जय व्लग ।
Posted in वालकथा |5Comments »
You are currently browsing the manka kura blog archives for मार्च, 2010.